झम्सिखेलको एक रेष्टुरेन्टको भित्तामा एउटा 'क्युआर' (QR) कोड टाँसिएको थियो, खानेकुरा अर्डर गर्नु भन्दा पहिले नै मैले मोबाइलमा 'क्युआर ड्रोइड' एप खोलेर उक्त 'क्युआर' कोड स्क्यान गरेँ, १२ प्रतिशत छुट भनेर स्क्यानरले देखायो । मेनु हेरेर केही खानेकुरा अर्डर गरियो, बिल तिर्नेबेला एउटा डिस्काउन्ट कार्ड देखाएँ, वेटरले १२ प्रतिशत छुट दिएको बिल ल्याए। मनमा केही शंका - उपशंका रहँदा रहँदै, एउटा इन्टरनेट कम्पनीले निकालेको डिस्काउन्ट कार्ड लिएकोथिँए, सोचेभन्दा सरल र सहज रुपमा काम गर्यो ।
अर्को पटक, जावलाखेलको एउटा डिपार्टमेन्ट स्टोरमा छिर्दा पनि त्यही कार्ड देखाएँ, त्यहाँ झन् गजब भयो । डिपार्मेन्ट स्टोरमा हरेक 'क्याटगोरी'का लागि फरक फरक छुट रहेछ, कार्ड मार्फत । कपडाको लागि छुट्टै, इलेक्ट्रोनिक्स सामानको लागि छुट्टै, ग्रोसरीका लागि छुट्टै छुटको व्यवस्था रहेछ। त्यसअघि उक्त डिपार्टमेन्ट स्टोर छिर्दा १ रुपैयाँ पनि छुट पाइएको थिएन। छुट पाउनु के थियो, 'दिल गार्डेन गार्डेन' भने झैँ भो ।
केही अघिसम्म छुटका कार्डहरुमा खासै विश्वास थिएन तर आफूले चाहेको ठाउँमा कार्डले काम गर्नथालेपछि, 'डिस्काउन्ट' कार्ड पनि चल्दोरै'छ भने झैँ लाग्यो । इन्टरनेट कम्पनी 'उनो भेन्चर'ले निकालेको उनो कार्ड, केही महिनायता नियमित प्रयोग गर्नथालेकोछु । उनोको बारेमा मैले लगभग ६-७ महिना अघि सुनेकोथिँए, अनि करिब ३ महिना पहिले उनो कार्ड लिँए, काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने शंका थियो, कारण यस अघिका केही अनुभवहरु राम्रा थिएनन् ।
उनो कार्ड, उनो इन्टरनेटको एउटा सानो अंश मात्र हो । खासमा उनो अनलाइन बिजनेस डिरेक्ट्रि हो, जसमा नेपालका २५ वटा सहरका विजनेसहरु लिस्टिङ गरिएकोछ । खाने ठाउँ, किन्ने ठाउँ, गाडी बनाउने ठाउँ, कपडा सिलाउने ठाउँ देखि लिएर इलेक्ट्रिसियन र प्लम्बर पनि उनोमा लिस्टिङ गरिएकोछ । अर्को अर्थमा, उनो लोकल सर्च इन्जिन हो, जहाँ "विजनेस", "प्रोफेशनल", "डिल्स", "इभेन्ट्स", "डिस्काउन्ट" खोज्न सकिन्छ । हाललाई उनो सर्च, वेबमा मात्र उपलब्ध छ, तर २०१५ को मध्य सम्ममा मोबाइल एप्स पनि आउनेछ ।
उनो कसरी प्रयोग गर्ने?
उनो चलाउनको लागि ब्राउजरमा uno.com.np मा गइ आफूलाई चाहिएको कुरा खोज्न सकिन्छ । खोजिएको कुरा साइटमा लिस्टिङ गरिएको छ भने, वायाँ साइडमा "विजनेस", "प्रोफेशनल", "डिल्स", "इभेन्ट्स", "डिस्काउन्ट" गरि ५ वटा फिल्टर देखिन्छ, जसबाट खोजिएको कुरालाई अझ फिल्टर गर्न सकिन्छ । (आफू त सँधै सर्च थिचिएपछि, डिस्काउन्ट फिल्टर नै थिचिन्छ सुरुमा, भनेको जस्तो ठाउँ र डिस्काउन्ट भेटिएन भने चाँहि , अरु फिल्टर प्रयोग गरिन्छ)। खोजिएको बिजनेस, प्रोफेशनल, डिस्काउन्ट आदिबाट झनै भित्र गएपछि उक्त विजनेसको 'डिटेल' देखिन्छ, जहाँ उपलब्ध डिस्काउन्ट देखि, कुन कुन कार्ड चल्छ, पार्किङ छ कि छैन, कुन स्थानमा छ, के सम्बन्धित 'बिजनेस' हो, फोटो ग्यालरी, रिभ्यु, आदि सबै कुरा देखिन्छ । आफूलाई प्रोफसनल वा बिजनेसको रुपमा पनि उनोमा दर्ता गर्न सकिन्छ ।
उनो कार्ड, उनो इन्टरनेटको 'डिस्काउन्ट' कार्ड हो । उनो कार्डको लागि साइटमा रजिष्टर गर्नुपर्ने हुन्छ । साइटमा रजिष्ट्रर गरिएपछि तपाईको कार्ड तपाईको घरमै आइपुग्छ तर कार्ड बनाउनको लागि एक हजार रुपैयाँ लाग्छ । एक हजार भनेर आत्तिहाल्नुपर्दैन, त्यसमध्ये ५०० रुपैयाँ तपाईकै आइपेमा ब्यालेन्सको रुपमा आइपुग्छ, अनि कार्ड लिएको समयमा २-३ सयको डिस्काउन्ट कुपन पनि पाउनुहुन्छ । यसअर्थमा कार्डको लागि तपाईले तिरेको मूल्य हुनजान्छ एक सय देखि दुई सय रुपैँया, जुन उनो डिस्काउन्ट कार्ड एक-दुई पटक प्रयोग गर्दैमा असुल उपर हुन्छ ।
Disclosure: I use Uno card. ;)